Garowe oo laga xusey maalinta haweenka 8 march 2015 | sowora
← ‘Women must be at the decision-making table at all levels’ UN tells high-level meeting in Chile
18-year-old woman raped and ‘left for dead’ in Leeds assault →
Garowe oo laga xusey maalinta haweenka 8 march 2015
Xaflad si heer sare ah loo soo agaasimey ayaa maanta ka dhacdey hoolka shirarka ee Jaamacadda PSU magaalada Garowe. Xafladda waxaa soo qaban wqaabisey Wasaaradda Haweenka iyo Arrimaha Qoyska ee Puntland, Xafladda ayaa ahayd mid lagu xusaayey maalinta Haweenka Adduunka oo caalami ahaa loo aqoonsadey 8 Maarso.
Madaxweynaha Puntland oo ka mid ahaa marti sharaftii lagu casumey xuska maalinta hawenka ayaa khudbad kooban ka jeediyey waxaana uu aad ugu dheeraadey doorka Haweenku ku lee yihiin bulshada.
“Haweenku waa xoog muhiim u ah wax soo saarka iyo horumarinta dalka waxay sidookale hooyadu door muhiim ah ka qaadataa kobcinta, barbaarinta, xanaanaynta caruurta oo ah mustaqbalka dalka”…..”Waxaan rabnaa inaynu samayno si aynu xoogaa uga faa’iidaysano una hormarino wanaaga tirada badan ee hooyadu samaynayso, waxaa ugu horeeya ee aynu samaynayno waa inayu xooga saarno waxbarashada Gabdhaha” Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweyne Cabdiweli gaas ayaa sheegay in ay wax ka bedalayaan nidaamka shaqooyinka loogu tartamo, si haweenku door muuqda u helaan, waxaana uu yiri:
“Waxaan ka xukuumad ahaan hada samaynay hab cusub oo shaqooyinka loogu tartamayo waadna aragteen in shaqooyinka wasaaradaha hada tartan loogalayo, markii aanu fursad u siinay dumarka inay tartamaan waxaa dhacday in Gabdhuhu ay noqdeen kuwa ku soo baxa tartankaas”.
Wasiirka Wasaaradda Haweenka iyo Arimaha Qoyska Anisa Xaaji muumin ayaa ka mid ahayd masuuliyiintii ka hadley, waxayna ka hadashey muhimadda 8 Maarso, xoojinta doorka haweenka.
Maalinta haweenka ee 8 Maarso ayaa leh taariikh fog, oo ka soo bilaamata qarnigii 19-aad, haweenka dalalka Yurub iyo Ameerika ayaa ahaa kuwo si weyn loo takooro, malahayn wax xquuq ah loomana oggoleyn xitaa in ay ka qayb-qaataan doorashooyinka oo codkooda dhiibtaan, tusaale ahaan dalka Maraykanka waxaa markii u horeysey loo oggolaadey hawenku in ay codkooda dhiiban karaan sanadkii 1920, haweenka Yurub iyo Ameerika waxay u halgameen xuquuqdooda, taas oo ay dedaalkooda ku soo dhacsadeen.